कपिल शर्माको करिअर धरापमा ! (हेर्नुस् ४ कारण)
एजेन्सी । कमेडी स्टार कपिल शर्माको जीवन पछिल्लो समय चौतर्फी दबावमा फस्दैआएको छ । जसले गर्दा उनी आफ्नो करिअर नै जोखिममा परेको महसुश गर्न थालेका छन् ।
केही कारणले गर्दा पछिल्लो समय कपिल कमजोर बन्दैगएका हुन् । भारतीय च्यानलका चलचित्र पत्रकारहरु त यसो पनि भन्न थालेका छन् कि कपिलको करिअर जोखिममा फसिसकेको छ । उनी अहिलेसम्मकै कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
त्यसो त कपिल घमण्डी भएको कुरा प्रारम्भिक चरणमा समेत देखाइसकेका थिए । पछिल्लो समय उनको चर्चाको उन्माद र घमण्डले आफैँलाई फसाउन थालेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
कपिलको करिअर जोखिममा पर्नुका ४ संकेत :
१. साथीहरु टाढिनु
कपिलका अति निकट मानिएका साथीहरु समेत अचेल उनीबाट टाढा हुँदैगएका छन् । यतिसम्म कि कुनै बेला कपिलसँग निकट केही साथीहरुसँग त बोलचाल समेत बन्द भएको छ । पछिल्लो समय कपिलको केही साथीहरुसँग त झगडा नै पर्यो । यसले गर्दा पनि उनका साथी टाढिए ।
२. टिआरपी खस्किनु
कपिलको टेलिभिजन शो को टिआरपी खस्किँदै जानुले पनि उनको करिअरमाथि अर्को चुनौती थपेको छ । यसो हुनुको पछाडि उनको कारण मात्रै नभएर उनलाई चुनौती दिने अरु कलाकार पनि स्थापित हुन थाले । जसले गर्दा अपिल नै निर्बिकल्प हुने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
३. सेलिब्रिटीले छोड्नु
कपिलको सेटका लागि अचेल सेलिब्रिटीहरु आउन तयार छैनन् । कपिलको केही स्वभावका कारण पनि उनीहरुले अचेल कपिलको आग्रहलाई नै इन्कार गर्न थालेका छन् । सेलिब्रिटीहरुले नै ठाडै इन्कार गर्ने अवस्था आएपछि कपिलले झन चुनौती महसुश गरेका छन् ।
४. कमजोर फिल्म
कपिलको नयाँ फिल्क ‘फिरंगी’को जुन स्तरमा चर्चा हुने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो भएन । ठीक उल्टो उनको फिल्मको उत्साहजनक चर्चा नै भएन । उनकै फ्यानहरुले समेत उनको फिल्मको प्रशंसा गरेनन् । जसले गर्दा कपिललाई थप निराश बनायो ।
सन् २०१७ को सुरुदेखि नै कपिलको जीवनमा आपत सुरु भएको धेरैको बुझाइ छ । उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धि विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चर्को आलोचना गर्दै एक ट्वीट गरेका थिए ।मोदीले उनको जवाफ त दिएनन् तर कपिल आफँैले पछि आत्मालोचना गर्दै माफी मागे । मोदीको प्रशंसकहरुको दबाव सहन नसकेपछि उनले रातको समयमा नशाले मातेको अवस्थामा भूलबस् ट्वीर गरेको भन्दै उनले माफी माग्नुपर्यो । एकपछि अर्को तनाव झेल्दैआएका यी स्टारको पछिल्लो समय बित्थामा झगडा पर्न थालेको छ । सार्वजनिक रुपमै उनको झगडा परेपछि झनै तनाव उत्पन्न भएको हो ।